Ovit Kitchen & Bath Company Faritany tanàna Zhishan Heshan tanàna, manamorona ny fototry ny fantson-drano sy ny fahadiovana fantany Shina. Ovit dia orinasa matihanina fampidirana R & D, orinasa mpamokatra entana, sy ny varotra.
Ovit naorina tamin'ny 2011. Nanomboka tamin'ny fiorenan'ny, handova fanavaozana fanahy, Ovit concentrates amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny Stainless vy noforonina hilatsaka vokatra. Mitondra ny hevitra hoe fananganana ny salama maitso fiainana dakozia, Ovit nanomboka tamin'ny andian-dahatsoratra vaovao vokatry ny S / S lakozia sy efitra fandroana cabinets kabinetra in 2016.
Raha ny mba hanana vokatra vaovao sy hanangana rafitra-barotra, Ovit anatiny manatsara foana ny tonga lafatra ny fitantanana rafitra sy ny fitantanana ny famokarana kalitao rafitra fitantanana, izay mitondra any amin'ny miovaova sy azo antoka tsara ary mitondra toerana ambony ao amin'ny orinasa.
Amin'ny hoavy, Ovit foana aloha ny hanorina sy hanatsarana ny fahaiza-fototra, amin'ny alalan'ny fanaovana olona mahantra, lamaody, avo lenta toy ny fitsipika, pour ho fanaovana aina kokoa, salama tsara, mety vokatra ambony kalitao.